Malbec - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Malbec iyinhlobo yewayini elivuthiwe elisetshenziselwa ukukhiqizwa kwewayini elibomvu. Kwavela ekudlukeni phakathi kwezinhlobo zasendulo, i-Prunelard black no-Magdelaine noire des Charentes.
Lezi zinhlobonhlobo zazibonakala zivela eCahors, eFrance, futhi zazijwayele ukuba umvini ovame ukutshala lonke eningizimu-ntshonalanga yeFrance phakathi neMinyaka Ephakathi.
Izindawo ezincane ngaphansi kwezinhlobonhlobo, noma kunjalo, zabhujiswa ngesikhathi sokuqubuka kwePhylloxera phakathi kuka-1875 kuya ku-1889, okwathi ngemva kwalokho imivini yatshintshwa nezinye izinhlobo ezazisondelene kangcono nomswakama waseMelika owawungeniswa ukuvikela imivini ngokumelene ne-phylloxera.
Indawo engaphansi kukaMalbec yahlushwa enye ngenkathi iqhwa ngo-1956, iningi labalimi, ngaphandle kweCahors, elibhekisela kwezinye izinhlobo zemfashini, njengeCabernet Sauvignon noMerlot.
UMalbec wanikezwa impilo yesibili e-Argentina, lapho uDomingo Sarmiento, ngaleso sikhathi owayengumbusi waseMendoza futhi kamuva eba uMongameli wase-Argentina, waqasha i-agronomist yaseFrance, uMiguel Pouget ukungenisa izihlahla zevini ezivela eFrance. USarmiento wayefuna ukwakha imboni yewayini e-Argentina, eyayilungisiwe njengeziFulentshi.
I-cutbec yokuqala ye-Malbec yafika e-Argentina ngo-1852, emashumini ambalwa eminyaka ngaphambi kokuba kuqhume isifo se-phylloxera eFrance. I-clone ethize yokungenisa, ngokumangalisayo, isuke ishonele eFrance.
Ngesikhathi amaFrance ehlukumeza ukukhiqiza uMalbec, umvini wathandwa yizimo zezulu ezifudumele
I-Argentina yenza ukuba izwe libe umkhiqizi omkhulu wezinhlobonhlobo. Ekuqaleni, ingxenye enkulu yewayini yayidliwe endaweni yangakini, kepha ngasekuqaleni kwawo-2000, izwe laqala ukungathí sina mayelana namazwe angaphandle kanye namasu okuthuthukisa nokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo othekelisiwe. UMalbec empeleni waba umvini obomvu wesignesha wase-Argentina.
Ngokusobala uMalbec wayevame kakhulu eFrance phakathi neMinyaka Ephakathi, ukuthi ngaphezu kwama-synonyms angaphezu kwenkulungwane akhiwe ngawo. Okuvamile kakhulu ku-Auxerrois, Côt, Malbec, Noir de Pressac, Peid-Roughe no-Pressac.
Ngesikhathi uMalbec ehlwanyelwe eStellenbosch nasePaarl kusukela ngawo-1920, kwakuyi-bottled yokuqala njengewayini elilodwa le-varietal ekuqaleni kwawo-1990, yi-Backsberg Estate Cellars, ephakathi kwePaarl neStellenbosch.
Ukuthandwa kukaMalbec kubonakala sengathi kukhula eNingizimu Afrika, kanti indawo engaphansi kokukhiqiza iyanda kusuka kumahektha angama-40 ema-1990 kuya kumahektha angu-450 ngo-2016. Izivini zitholakala kuzo zonke izindawo zokukhiqiza zezwe, ne-Swartland, ePaarl kanye nokubalwa kweStellenbosch cishe izingxenye ezintathu kwendawo yonke ngaphansi kokukhiqizwa.
Ungumlimi okhuthele onomkhuba okhwelayo. Izinga lokukhiqiza phakathi kuka-10 t / ha kuya ku-14 t / ha.
Amagilebhisi avuthwe phakathi nonyaka, kusukela ekupheleni kukaFebhuwari.
Amajikijolo amnyama, azungeze futhi asayizi obuphakathi. Isikhumba sincane futhi sinzima, kanti inyama iyamanzi.
Amaqabunga aphakathi nendawo, enombala obumnyama obomvu, ojikelezayo futhi ogcwele oboshwe abathathu.
Izinhlobonhlobo zithinteka ekukhunjweni kwe-mildy.
I-Malbec isetshenziselwa ukudala ama-varietal single wine noma ukwengeza umbala kanye nezithelo zokuhlangana. It is ikakhulukazi esetshenziswa Bordeaux isitayela ukuhlangana, kanye nezinhlobonhlobo, ezifana Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc noma Petit Verdot.
Izinhlobonhlobo zinamakha ama-berry amnandi, njenge-plums, ama-blackberries, umjunipha, ama-cherries neshokoledi elibabayo. Kubonakala sengathi kuveza ama-flavour amaningi kakhulu ngaphansi kwezimo zokukhiqiza okungenasipiliyoni.